Chii chichava maReaders achaonekwa mukati megore ra2018? | MaReaders ese
Joaquin Garcia | | makambani, vaverengi
Pave nemazuva mashoma kubva patakatanga mwedzi wechishanu we2018 uye kusvika parizvino, iyo nyowani eReader inotangisa yanga isingave yakawanda kana kufarirwa kwazvo. Iwo makuru mabrands muchikamu haasati ataura pamusoro pemidziyo yavo uye kusvika parizvino zvigadzirwa zviviri chete zvakapihwa, izvo zvisingakwanise kutengwa parizvino. Izvi hazvireve kuti mabhii makuru asiya eReader asi kuti vari kugadzirira zvishandiso zvitsva zvavanozoburitsa gore rese mune yakasarudzika uye yakasarudzika nzira.
Izvo zvishandiso zvakaunzwa kusvika parizvino ndizvo SonyDPT-CP1 uye eOnbook. Midziyo iyi yakakura maReaders echiratidziri. Uye zvinoita sekudaro iyo hombe skrini ichave chinhu chinoratidzira kuri kuuya kuburitswa kweReaders. Tevere tichaita ongororo yeReader yakavhurwa iyo ichavhurwa kana inotarisirwa kuvhurwa panguva ino ya2018.
Yokutanga inonzi InkBook Infinity. Ichi chishandiso ndechekambani yeInkBook, inozivikanwa mukati memakore aya yekushanda nemidziyo inodarika 6 ”screen pamwe nehunyanzvi hutsva. Mune ino kesi isu tinotaura nezve InkBook Infinity, eReader ine 10,3 ”skrini ine tekinoroji yeCarta.
Iyo eReader ichave iine mwenje wepamberi uye yekubata skrini. Zvinonzi mudziyo uyu ichatangisa ne1 Gb yegondohwe ndangariro, 3.000 mAh bhatiri uye USB-C chiteshi kubatanidza ichi chishandiso nemimwe michina senge komputa kana laptop Iyo processor yeiyi eReader ichave i.MX6SL pa1 Ghz kunyangwe chiri chinhu chisina kusimbiswa parizvino. Mutengo uye zuva rekuburitsa zvinhu zviviri zvatisingazive isu, asi kana tikatarisa kutungamira kweInkBook, chishandiso chinogona kusapfuura € 300.
2 Tolino Peji 2
4 Mhando nyowani Yekutanga?
5 Uye maReader ese aya, angatengwa riini?
Iyo Onyx Boox kambani ndeimwe yemakambani anoshanda zvakanyanya kana zvasvika kune modhi inotangisa. Isu tichangobva kuona eReader ine hombe screen uye zvinotarisirwa kuti mamodheru matsva achatangwa munguva ya2018. Kunyanya, isu tinoziva mana mamodheru: Onyx Boox Nova, Onyx Boox Cherechedzo S, Onyx Boox e-Music Score, uye Onyx Boox Poke. Yekupedzisira ine 6 "skrini apo vamwe vese vane makuru ma skrini.
Chinonyanya kushamisa kwandiri ndeche Onyx Boox Nova, chishandiso chinenge chiine 7,8-inch skrini ine 1 Gb yegondohwe ndangariro uye Android 6 seye inoshanda system. Iyo eReader ichave iine yemagetsi inki screen ine Carta tekinoroji, Wi-Fi uye Bluetooth. Cherekedza S uye e-Music Score inosvika gumi ”, imwe inonyora-kutora (Cherechedzo S) uye imwe iri munyika yemimhanzi (e-Music Score). Mhando dzese dzichava neApple 10, vhezheni ichangoburwa inozoita akawanda maapplication emaappleapps kuti ashande pazvinhu izvi, seEvernote, Google Calendar kana Google Docs, pakati pevamwe.
Midziyo iyi inofanirwa kuteverwa zvine hungwaru se aya maReaders modhi akachena machena maReaders, ndiko kuti, ivo vanotengeswa kuti vagadzire mamwe maReaders ezvitoro kana maketani ezvitoro zvemabhuku emunyika kwavanoshandura zita asi vanoramba vakangofanana, izvi zviri kuwanika kune vamwe vashandisi kupfuura mamwe maReaders akadai seInkBook kana Tolino.
Tolino Peji 2
Iyo Tolino kana Tolino mubatanidzwa, gore rimwe nerimwe rinopa chimwe kana kupfuura michina iyo iyo inoedza kukwikwidza neiyo huru Amazon. Kunyangwe chiri chokwadi kuti zvinowanzo zviitira iyo yeFrankfurt Fair, ingangoita mwedzi waGumiguru, pazvinotora mukana wekuita kuvhurwa uku. Gore rakapera ivo vakatengesa Epos Tolino, eReader ine 7,8-inch screen uye Tsamba uye HZO tekinoroji.
Uyu muverengi ari kubudirira muCentral Europe uye zvinoita sekunge zvichazovandudzwa gore rino asi kana yako yepasi-yekupedzisira eReader ichida, Tolino Peji. Ichi chishandiso Izvo zvaizowedzera bhatiri rayo, kuwedzera kuzvitonga kwayo uye kugadzirisa resolution kubva 800 pixels mazana matanhatu pa1024 x 728 pixels. Kugadziriswa kwakapararira kwazvo munyika yeReader.
Ichi ndicho chigadzirwa chisingazivikanwe kusvika parizvino pane zvese uye chatinoziva nezve kuvapo kwayo neFCC. Zita rechinhu ichi rinoenderana neKobo kana Rakuten Kobo brand eReader. Iyo FCC mushumo Inogumira kusvikira mwedzi waGunyana saka mwedzi iwoyo unotarisirwa kuve zuva rekutanga.
Nezve ripi renji nderayo iyo Kobo Clara HD, hazvizivikanwe asi tikatarisa zvinyorwa tinogona kuona izvozvo ine 1.500 mAh bhatiri, bhatiri diki rinogona kuenderana kune yakaderera-yepakati renji eReader, ndiko kuti, kutsiva kweKobo Aura Edition 2. Chero zvazviri, kusvikira mwedzi waGunyana hatizomboziva chero chinhu nezve ichi chishandiso.
Mhando nyowani Yekutanga?
Amazon haina kuburitsa michina mitsva kwenguva yakareba, angangoita mamodheru emidziyo yayo yepamberi: iyo yakakosha Kindle uye iyo Kindle Paperwhite. Aya maviri maAmazon eReader mamodheru ari mune zvinoonekwa nenyanzvi zhinji vanofunga kuti Amazon ichagadzirisa munguva pfupi. Yekupinda-chikamu Kindle parizvino yakatengeswa ichine Pearl tekinoroji inoratidza, yechinyakare ratidziro inogona kupihwa mudhara kuti iite nzira yeCarta HD kuratidza, pasina kuwedzera mutengo wechigadzirwa.
Iyo Kindle Paperwhite yaisazoshandura iyo skrini asi yaizogamuchira odhiyo kuburitsa, kuti iwirirane neAmazon's Inonzwika audiobook sevhisi. Uye ndizvo Kambani yeBezos iri kubheja zvakanyanya pane Anonzwika uye maSevhisi masevhisi, masevhisi anoenderana neanoda zvese zvishandiso kunze kwemaReaders ako ayo asati atsigirwa. Iwo ekumusoro-magadzirirwo michina anogona kugamuchira chimwe chinhu chitsva asi hazviite nekuti iyo Kindle Oasis 2 yakanga ichangobva kuvandudzwa uye chero shanduko ingareva kurasikirwa mune ino modhi.
Chero zvazvingaitika, ndinotenda (sezvinoita nyanzvi zhinji dzeindasitiri) iyo Amazon Kana iwe ukagadziridza akati wandei mamodheru emaReaders ako eiyi 2018 kuitira kuti uenderane nemasevhisi ako ese, ekare uye matsva (Alexa inosanganisirwa).
Uye maReader ese aya, angatengwa riini?
Uyu ndiwo mubvunzo urikubvunzwa nevazhinji venyu. Pakati pegore rino ndakaona kuti mwedzi miviri yakave sei nzvimbo yekutangisa yeReader: mwedzi waKubvumbi uye mwedzi waGunyana. Sezvo pasina chimwe cheizvi zvigadzirwa chakatangwa mukati memwedzi waApril, zvinoita sekudaro Uchave mwedzi waGunyana apo tichaona michina mitsva iyi. Kunyangwe iwo maAmazon modhi aigona kuvhurwa mumwedzi waZvita, achangopera Black Chishanu. Chero zvazvingaitika, Ini ndinotenda kuti parizvino pane zvakanaka zvigadzirwa pamusika kuti zvikwanise kuwana imwe uye usarasikirwe nehunhu zvine chekuita nemhando nyowani. Kana iwe uchida kumutsidzira kana kutenga eReader.
Yakazara nzira kuchinyorwa: MaReaders ese » Hardware » vaverengi » Chii chichava maReaders achaonekwa mukati megore ra2018?
Gore rino iyo PocketBook InkPad 3 yakaonekwa (ini ndichangozvitenga) uye rega ndikutaurire kuti kunyangwe isiri yakachipa kana kuti iri nyore kutenga, chishandiso chandakakurumidza kufarira.
Ichi hachizi chinoregeredzwa kwazvo muongororo, uye hapana munhu anopwanya zita raro muzvinyorwa zveenzvimbo dzakasarudzika, asi iye anoda kuziva, anofanira kuongorora zvishoma; Ini ndinovimbisa kuti zvakakosha.
Ini ndinoshamisika kana Amazon ichasarudza kuvhura hombe screen modhi (inopfuura 9 ″). Kubva Kindle DX haana kuzotya uye ndiri kuda kuziva. Ini ndaigara ndichitaura kuti makuru evhavha vanoverenga vanofanirwa kuve neruvara pane avo masikirini asi ndinotya kuti hazvingamboitika, kanokwana gumi rino.
Ini ndinoona iyo Onyx yemamodheru mamodheru anonakidza kwazvo.